Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" yakazoburitswa, ziva kuti chii chitsva | Kubva kuLinux
Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" yakazoburitswa, ziva kuti chii chitsva
Nhasi Canonical yakafumura iyo Ubuntu 20.04 LTS kuburitswa, inova yekutsigira yakareba kukanda, ndokuti, inoverengwa iine makore mashanu ekutsigirwa uye kuti kumakambani kana vanhu vanofarira mamwe makore ekutsigirwa, imwezve makore mashanu anopihwa (sekureba sekubhadhara kwavo rutsigiro urwu) kweanosvika makore gumi.
Ubuntu 20.04 LTS yakanyorwa zita "Focal Fossa" Iyo ndiyo yazvino vhezheni yeiyo LTS vhezheni (yakaburitswa makore maviri ese) uye iyo syaishandiswa zvakanyanya munzvimbo huru dzeveruzhinji seAmazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, uye Google Cloud Platform, shandisa munzvimbo dzedata nzvimbo.
Muchidimbu technical, una yenhau dzeiyi vhezheni nyowani Ubuntu 20.04 LTS nemavara ayo epamutemo (Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Mate, Studio, nezvimwewo) ndiyo Linux 5.4 kernel, iyo iri pakati pehunhu hwayo rutsigiro rwehupamhi hwesimbi (senge AMDNavi 12 uye 14 GPUs) uye exFAT faira system, semuenzaniso.
Imwe yeshanduko inoitwa neiyi nyowani vhezheni ndiyo rwenharaunda rutsigiro rweWireGuard, Nekudaro, iyi vhezheni yeKernel 5.4 haina kuisanganisira sechinhu asi yanga iri kuna Kernel 5.6, WireGuard inogona kubatanidzwa mune iyi vhezheni yeKernel. WireGuard ndeimwe yeanonyatso kuzivikanwa open source mhinduro dzekumisikidza kwakachengeteka kubatana pasi peVPN.
Kunze kwaizvozvo inoitwa dingindira "rerima", iyo "fractional scale" iyo inogona kumisikidzwa nekukurumidza pane desktop uye iyo inovandudza kuratidzwa kwedesktop pane yakakwira resolution skrini.
Iye zvino bhatani rakasiyana rinopihwa izvi mune yekuratidzira dialog. Vagadziri vagadzirisazve iyo yekuvhara skrini uye yekukiya skrinikana, izvo izvo zvino zvinoita kunge zvakanyanya kudhara. Canonical yakagadzirisawo mashandiro eGnome, sezvo Gnome iri kukurumidza kukurumidza kupfuura iyo vhezheni yapfuura.
Kana zviri zvekushandisa system, tinogona kuwana izvo mune iyi vhezheni Tsigiro yeOpenSSH U2F inoitwa, Uye zvakare, pamwe nekubatanidzwa kweOpenSSH 8.2, rutsigiro rweU2F / FIDO zvishandiso zvemidziyo zvakawedzerwa kubvumidza Hardware-based maviri-factor kuvimbiswa.
Kugovera izvozvi Inotsigira kuratidza iyo OEM mutengesi logo pakutanga. Kazhinji, Canonical yakashanda nesimba pachiitiko chebhutsu se iyo kernel uye initramfs mufananidzo ikozvino unouya muLZ4 compression fomati, izvo zvinoita kuti system itange nekukurumidza.
Zvakare, nginx-core haisati yatumirwa nenhaka geoip module inogoneswa nekukasira, sekunge iyo nhaka geoip module iri kushandiswa mune nginx, unogona kusangana nekusimudzira nyaya kana iyo geoip module isina kuremara mukugadzirisa. .
Pane rimwe divi Python 2 yakabviswa kubva muchirongwa uye ikozvino nekukanganisa, vhezheni 3.8.2 inoshandiswa. Kune zvekare zvimwe shanduko kuketani yezvishandiso. Focal Fossa inosanganisira glibc 2.31, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Ruby 2.7.0, PHP 7.4, Perl 5.30, uye Golang 1.13.
Zvimwe kunze kwaizvozvo, iyi vhezheni itsva inosanganisira yakagadziriswa inogadziridza Zvekushandisa zvechinyakare, kusanganisira Thunderbird 68.6.0 (inosanganisa nekumisikidza iyo Mheni yekuwedzera kwekarenda manejimendi), LibreOffice 6.4, Firefox 74, BlueZ 5.53, iyo 3D Mesa Graphics Raibhurari vhezheni yava 20.0, nepo hurongwa PulseAudio ruzha rwenzwi rwakabatanidzwa neshanduro 14.0.
Dhawunirodha uye tora Ubuntu 20.04 LTS
Chekupedzisira, kune avo vanoda kurodha pasi nekuisa iyi vhezheni itsva yeUbuntu pamakomputa avo kana kugona kuiyedza mumushini chaiwo, Ivo vanofanirwa kurodha iyo system mufananidzo kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo system.
Zvakare nemifananidzo yeRaspberry Pi 4, Raspberry Pi 2, Pi 3B, Pi 3B +, CM3 uye CM3 mabhodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu 20.04 "Focal Fossa" yakazoburitswa, ziva kuti chii chitsva
Persy Cat akadaro
Ini ndichaomerera naDebian kwemakore mazhinji
Pindura Persy Gato
Python 2.7.18, yekupedzisira gadziriso vhezheni yePython 2.7 uye iyo 2.x bazi
Facebook yakaburitsa zvigamba zvinovandudza iyo Slab memory controller muLinux